Manchester United Oo Shaacinaysa Warkii Ugu Weynaa Iyo Xiddiggii Wadne Xanuunka Ku Hayey Ee Paul Pogba Oo Go'aan Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa - Gool24.Net
Manchester United Oo Shaacinaysa Warkii Ugu Weynaa Iyo Xiddiggii Wadne Xanuunka Ku Hayey Ee Paul Pogba Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa
Manchester United ayaa rajaynaysa inay si degdeg ah ugu dhawaaqdo heshiis shan sannadood ah oo uu qalinka ku duugayo xiddiga reer France ee Paul Pogba oo muddo dheer ay ka walaacsanaayeen xaaladdiisa mustaqbal.
Xiddiga reer France ee khadka dhexe oo ay 12 bilood ka hadhsan yihiin heshiiskiisii sannadkii 2016 uu ugu soo wareegay Old Trafford oo shan sannadood ahaa, waxay in muddo ah isku dayaysay Red Devils in heshiiskiisa la cusboonaysiiyo, hase yeeshee laacibkan ayaa ka warwareegay, iyadoo lala xidhiidhinayay kooxo badan oo ay ku jiraan Real Madrid, Barcelona, Juventus iyo PSG.
Pogba ayaa sannadkii 2018 waxa uu ku dhawaaday inuu ka tago Man United markii uu tababare Jose Mourinho uu kaydka dhigay, isla markaana si caam ah warbaahinta uga canaantay, hase yeeshee Ole Gunnar Solskjaer ayaa markii uu yimid kaalintiisa siiyey Pogba, kana dhigay hoggaamityaha khadka dhexe.
Xagaagii hore ayaa mar la wariyey inuu shandaddiisa ka xidhxidhay Old Trafford, laakiin haddana Red Devils ayaa kusii adkaysatay in aanay fasaxayn iyagoo cirka ku shareeray qiimihiisa oo ay ka dhigeen ugu yaraan £100 milyan oo Gini, balse xagaagan oo kooxo badan ay isku diyaarinayeen soo dhoweyntiisa ayaa waxa caqabad kale noqday fayraska Korona ee dhaqaalaha dunida iyo midka kubadda cagtaba hoos u dhigay.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, Paul Pogba ayaa go’aan ku gaadhay inuu sii joogo Old Trafford, heshiis oo shan sannadood ahna uu saxeexo.
Wargeysku waxa uu sheegay in markii uu Pogba kasoo laabtay dhdaawaca ay qaab wanaagsan isku fahmeen Bruno Fernandes, ciyaartiisii horena usoo noqotay, taasina u iftiimisay in Red Devils ay horyaalka Premie rLeague iyo Champions League ku tartami karto.
Warku ma sheegin waqtiga rasmiga ah ee ay Manchester United ku dhawaaqi doonto qandaraaskiisa, laakiin xagaagan marka uu dhamaado horyaalka Premier League ayaa la filayaa in labada dhinac ay qalinka ku duugaan heshiiskooda.
Pogba ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigayay tan iyo intii uu horyaalku dib u bilowday, laakiin waxa uu heerkiisii ka hooseeyey ciyaartii Southampton ay barbarraha 2-2 ah la galeen Isniintii.